Kuunza mota kubva kuSweden kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutsvaga kuendesa yako french mota kuUnited Kingdom?
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuFrance dzinoendeswa kuUK nevaridzi vadzo uye vatove pano, vachingoda kuti mapepa ekunyoresa ekunze agadziriswe neDVLA. Isu tinogona zvakadaro kubata nzira yese yekutora mota yako kubva kuFrance kuenda kuUnited Kingdom kana mota yako isiri muUnited Kingdom kare.
Zvichienderana nenzvimbo yemotokari inogona kuendeswa kure, kana kuiswa pamudziyo…
(Dzimwezve ruzivo pano…)
Kana uchipinza mota kubva kuFrance kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero pasina kupa mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuFrance kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweanouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira paawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.